प्याजमा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही, ४८ रुपैयाँमा खदिर गरेर १ सय ५० रुपैयाँसम्म बिक्री – Krishi Television
प्याजमा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही, ४८ रुपैयाँमा खदिर गरेर १ सय ५० रुपैयाँसम्म बिक्री
बुधबार ३१ भदौ, २०७७ प्रतिक्रिया
अनुगमनका क्रममा बाफलबाट बल्खु आएकी खुद्रा व्यापारी रमिला महत अनुगमन समितिसँग सोध्दै थिएन् । सर आज प्याज किन्न नपाइने हो? उनले गुनासो गरिन् ‘व्यापारीहरुको प्याज छ तर अरुलाई बेचिसकेको भनेर हामीलाई बेच्न मान्दैनन् । बजारमा प्याजको किन्न नपाउने उनी मात्र होइनन् । कीर्तिपुर, नयाँ दोबाटोबाट आएका अनिल बिष्ट पसल नं. १११ मा रहेकी व्यापारी सरोजा राणालाई देखाएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ दिदीकोमा प्याज छ तर, आफ्ना ग्राहकलाई मात्र बेच्ने भनेर मलाई बेच्नु नै हुन्न । यो गुनासो गर्दा गर्दै उनले कालोबजारी गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै अनुगमन समितिलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिए’ उनको आरोप सुनेपछि व्यापारी सरोजा भन्दै थिइन् ‘मैले नियमित सामान दिने गरेका ग्राहकलाई राखिदिएन भने उनीहरु मेरामा सामान किन्न आउँदैनन् । मैले त अरु दिन पनि त व्यापार गर्नु परो नि । उनी प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा प्याज बिक्री गर्दै थिइन् ।’
त्यसपछि टोली कालीमाटी तरकारी बजार आयो । बजारले आज प्याजको भाउ ११७ देखि १२० सम्म भएको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यो सूची देखाएर व्यापारीहरु कालीमाटीले बेच्न पाउने हामीले किन नपाउने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।
व्यापारीको यो आवाज समितिले कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार बिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बिनोदकुमार भट्टराई लाइ सुनायो । यसको उत्तरमा भट्टराईले भन्नुभयो ‘यो मूल्य निर्धारण होइन । बजारमा आज भएको किनबेचको अवस्था हो । यसलाई हामीले सार्वजनिक गरिदिएका हौं । यो सूचनका आधारमा सरोकारवालाले अनुगमन र नियमन गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
बजारमा देखिएको यो अव्यवस्थालाई पूर्ण निगरानी गर्छौ । अनुगमनपछिको प्रतिक्रियामा समितिकी संयोजक एवं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘आयातमा कम भएको हुन सक्छ तर त्यही निहुँमा बजारमा भाउ बढ्ने अवस्था होइन । मौकाको फाइदा उठाउनेहरुमाथि हाम्रो निगरानी निरन्तर रहन्छ ।’
अनुगमनमा क्रममा खाद्यबस्तुमा दाल, चामल, गेडागुडी, पानीसहित पेय बस्तु, तरकारी र फलफुलको गुणस्तर, मूल्य र बजार सहजताको अवस्था हेरिरहका छौं । कृषि बिभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी भन्नुहुन्छ ‘ठाउँठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
गुणस्तर, मूल्य र सहजताका दृष्टिले उपभोक्ता पाइलैपिच्छे ठगिएका छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना भन्नुहुन्छ ‘अनुगमनको प्रभावकारिताका लागि महानगरको नेतृत्वमा थालिएको अनुगमनलाई अरु निकायले सहयोग गर्नुपर्छ । गृह र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिले पनि महानगरको अनुगमनमा सहभागी हुनुपर्छ ।’